Nepal - आवरण कथा : को–पाइलटको निसाना कता ?
आवरण कथा : को–पाइलटको निसाना कता ?
लामो मौनता अनि चलखेल
एउटै हेलिकोप्टरमा जनकपुर पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २ भदौमा । त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश २ संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । खासगरी धनुषाको बर्मझियामा २४ वर्षअघि हत्या गरिएका माओवादी नेता रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्न गएका थिए प्रचण्ड । प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरिसकेपछि ओली पनि बर्मझिया पुगेर यादवको स्मृतिसभामा सहभागी भए । त्यहाँ ओलीले प्रचण्डको प्रशंसामा केही शब्द पनि खर्चिए । उनले भने, “प्रचण्डजी परिआए युद्ध गर्न पछि नपर्ने, फेरि आवश्यकता अनुसार शान्तिमा पनि आउन सक्ने बहादुर नेता हो ।”
प्रचण्डलाई पुलकित बनाउने शब्दको फूलवर्षा गरेको एक साताभित्रै ओली किन तिक्तता साँध्ने तहसम्म पुगे ? सत्ताराजनीतिको वरपर हिजोआज यही जिज्ञासा सुरु भएको छ । किनभने, ११ भदौमा बालुवाटार पुगेका सम्पादकहरूसँग ओलीले भनेका थिए, “माओवादीले हिजो यो राजतन्त्रविरुद्ध ‘हामी होइन क्यारे’ भन्दै दरबारमा मान्छे पठाएर साँठगाँठ गरेकै थियो । सेनाविरुद्ध हामी छँदैछैनौँ भनेर विभिन्न जर्नेलहरूसँग साँठगाँठ थियो । ती माओवादी खुल्ला हुनेबित्तिकै मनोनीत सांसद हुन पुगेका पनि थिए । जर्नेल हुँदाखेरि ती मान्छे नेपाली सेनाको जागिर खाएर माओवादी नेतालाई बोकेर कुद्थे गाडीमा । त्यसकारण लिंकेज कसको, कहाँ भनेर भन्न गाह्रो छ । अहिले पनि म व्यक्त गर्दिनँ यो । जहाँ न पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे पत्रकार † तपार्इंहरू जान्नुहुन्छ, मेरो त्यत्रो धेरै एक्सेस छैन ।’
त्यसको ९ दिनपछि अध्यक्ष प्रचण्डले ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्छ । पुनर्गठन गर्दा यो वा त्यो समूह हेरिन्न’ भनेका भए पनि बुझ्न कठिन छैन– उनको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै हो । मन्त्रीलाई कस्तो निर्देशन दिने, कसरी काम लगाउने सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन मानेन भने मात्र मन्त्री दोषी हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी योजनाको खाका बनाएर मन्त्रीलाई काम/निर्देशन दिएकै छैनन् । फेरि प्रचण्डले प्रस्टै बुझिने भाषामा भनिरहेका छन्, “जोसुकै परून्, सरकार असफल हुने, पार्टीलाई असफल पार्ने र जनतालाई निराश पार्ने खालका गतिविधि देखिए भने अब हामीले कुनै न कुनै स्टेप चाल्नैपर्छ ।”
सरकारप्रति आम उत्साहको पारो झर्दै गरेको चर्चा हुँदै गर्दा यता प्रचण्डमा बेचैनी सुरु भएको छ । प्रचण्डले सरकारको जुन तहबाट बचाउ गर्न सक्थे, त्यो तहबाट नगर्नुका पछाडि यही विश्लेषण नै कारक हो । यही बेला उनले भारत र चीन भ्रमणको हतारो देखाउनु, सरकारको बचाउमा लोसे पाराले ‘सक्रिय’ हुनु, निकटस्थहरूसँग सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुले के संकेत गर्छ ? सार्वजनिक रूपमा समेत सरकारको कामबारे गम्भीर समीक्षा सुरु भइरहेको छ भन्नुजस्ता दृष्टान्तले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन प्रचण्ड ओलीको असफलताको पखाईमा छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । बाहिर जे प्रचार गर्न चाहे पनि प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि सन्देहको घेराबाहिर छैन । २१–२६ भदौसम्मको भारत भ्रमण उनले ओलीकै सल्लाहमा दुई दिन छोट्याएका छन् । भारतबाट फर्केको चार दिनपछि ३० भदौमा प्रचण्ड चीन जाँदैछन्, जहाँ उनको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट हुनेछ ।
प्रचण्डको सदावहार स्वभाव छ– आफ्ना उकुसमुकुस पोख्नुपर्दा ‘मैले अहिले धेरै बोल्ने परिस्थिति छैन जस्तो लाग्छ, धेरै बोल्ने बेला भएको छैन’ भन्दाभन्दै निकै कुरा ओकल्ने । खुमलटारमा पनि प्रचण्डले पुरानै स्वभाव दोहोर्‍याए । र, स्वीकारे, “दुई अध्यक्षका बीचमा अहिले गम्भीर ढंगले छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बीचमा ३/४ महिना अलि त्यस्तो गरिएको थिएन । अहिलेचाहिँ चाहे गोविन्द केसीको अनशन होस् या महिला हिंसाका घटनामा कुराकानी सुरु भएको छ ।” दुवै शीर्षस्थको सल्लाहमा छिट्टै कुनै कदम चालिन सक्ने उनको संकेत थियो । कुरो बुझियो, वास्तवमा दुई नेताबीच राम्ररी कुरै भएको रहेनछ ।
साता–दस दिनभित्रैमा प्रचण्डमा देखिएको छटपटी, ओली–प्रचण्डले एकअर्कालाई ‘काउन्टर’ दिने गरी पत्रकारसँग गरेका भेटघाट, सुस्तसुस्त घोचपेचका परिदृश्यबाट उनीहरूबीच के खिचडी पाक्दैछ, छर्लंग हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको काम गराइसँग प्रचण्ड सन्तुष्ट नभएकाले सरकारको रक्षामा खुलेर नबोलेको नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको दाबी छ । त्यसलाई पत्याउने हो भने पछिल्ला दिनमा नेता नेपाल, झलनाथ खनाललगायतको साथ लिएर प्रचण्ड सत्तारोहणको तानाबाना बुन्ने चाँजोपाँजोमा लागेका छन् । त्यसका लागि एकातिर उनले नेपाल, खनाललगायतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन दिनहुँजसो फोन/भेट गरिरहेका छन् ।
तर, तथ्यहरूले भण्डारीको जिकिरलाई प्रमाणित गर्दैनन् । जस्तो : ११ भदौमा नेकपाको सर्लाही–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले गरेको सांसदहरूको सम्मान कार्यक्रममा पनि प्रचण्ड अतिथि थिए । सरकारको समर्थनमा उनी यति मात्र बोले, ‘कतिपय तत्त्व पार्टी एकता र सरकारलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । त्यस्ता षड्यन्त्रलाई एक–एक गरेर परास्त गरिनेछ ।’
पूर्वएमालेको मुखपत्र नवयुगको असार अंकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘सय दिनको सरकारको कामबाट धेरै सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिएको छैन । हामीले चुनावका बेला जनताका अगाडि गरेको सुशासन, स्थिरता र विकासले नयाँ गति लिन्छ, उत्साहपूर्ण ढंगले भयो है भनेजस्तो भएको छैन ।’ त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण तागत लगाएर बजेटको बचाउ गर्न पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रचण्डले ओलीको निर्देशनविपरीत ३ असारमा भनिदिए, “बजेट चिसो पानी खन्याएजस्तो भयो ।”
सरकारको प्रतिरक्षामा अध्यक्ष प्रचण्ड मौन रहेको धारणा यथार्थपरक नभएको बताउँछन्, उनका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा । “अध्यक्षले आफूले सके/भ्याएसम्म सरकारको बचाउ गरिरहनुभएको छ । उहाँ जति बोलिरहनुभएको छ, सरकारकै डिफेन्सका लागि बोल्नुभएको हो । यहाँभन्दा बढी बचाउ कसरी गर्ने ?” सापकोटा भन्छन्, “प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लाग्नुभएको भन्ने पनि बिल्कुल सही होइन ।”
भारतको पञ्जाबमा घरजम जोडेकी माइली छोरी रेणु र ज्वाइँ अर्जुन पाठकलाई नेपालमै झिकायो प्रचण्ड परिवारले । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू राजनीतिमा स्थापित भएपछि जर्मन नागरिक बनेकी छोरी सुजातालाई झिकाएर जिम्मेवारी दिएभन्दा कम थिएन, प्रचण्डको यो शैली । प्रचण्डले छोरीलाई पञ्जाबबाट ल्याएर समानुपातिक सांसद र गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाए भने ज्वाइँलाई संसद् सचिवालयको खजान्ची, गणेशमान पुन आपूर्तिमन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिव बनाए । सांस्कृतिक विचलनका कारण विवादित बनेका छोरालाई पुन: सचिवालयमा भित्र्याए । छोराको निधनपछि हाल बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाएका छन् । प्रचण्डकी जेठी छोरीको स्तन क्यान्सरले निधन भयो । अहिले उनले ज्वाइँ सागर केसीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । विराटनगरका पवन आचार्यसँग दोस्रो घरबार जोडेकी गंगालाई प्रचण्डले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् ।
कुनै समय थियो– प्रचण्डले बोल्ने प्रत्येक अभिव्यक्तिले कुनै न कुनै महत्त्व राख्थ्यो । त्यसले निकै ठूलो तरंग ल्याउँथ्यो । पछिल्ला दिनमा प्रचण्डका अभिव्यक्तिले ‘कभरेज’ पाउन छाडेका छन् । यसका दुई कारण छन् । पहिलो, सक्रियतामा कमी । दोस्रो, महत्त्व राख्ने अभिव्यक्ति नदिनु । प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षा नगर्नुका पछाडि कुन पक्षले काम गरेको होला ? उनी निकट एक नेता भन्छन्, “दुवै पक्षले काम गरेको छ । प्रचण्ड पहिलेजस्तो सक्रिय पनि छैनन् । अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति पनि निकै कम दिइरहेका छन् ।”